၂၀၂၀ HPA Tech Retreat အတွက်ထုတ်ပြန်ရန်အဆိုပြုလွှာများခေါ်ဆိုခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » 2020 HPA Tech မှသီးသန့်အဘို့ထုတ်ပေးအဆိုပြုလွှာနှင့် Call
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း 2020 HPA Tech မှသီးသန့်အဘို့အအဆိုပြုချက်များအတွက်ခေါ်ဆိုခထုတ်ပေးခဲ့ပါသည်®အဆိုပါ 25 ခြေတစ်လှမ်းအရာth မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာအတွက်ဒီရှိသင့်သောအဖြစ်အပျက်၏နှစ်ပတ်လည်နေ့။ နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုမီဒီယာများ၏လမ်းဆုံမှာအလုပ်လုပ်သူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏နှစ်ပတ်လည်စုဝေးနေတဲ့နှစ်ရှည်ရောင်းထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့်၏အရှိဆုံးကျယ်ပြန့်သောအဘို့ကိုအရာပင်မပရိုဂရမ်, ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းတင်သွင်းအဆိုပြုချက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပြုချက်သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 25, 2019 သည်အထိလက်ခံခဲ့သည်လိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ပွင့်လင်းယခုနံနက်စာစားပွဲဝိုင်းများအတွက်တင်ပြကြသည်။
ယခုနှစ်တွင်အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့် Tech မှဖွဲ့စည်းထားပြီးပါလိမ့်မည်အပို (TR-X ကို) ဆုတ်ခွာခြင်း, supersession အဓိကညီလာခံ, မနက်စာစားပွဲဝိုင်းကို၎င်း, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဇုန်။
စွန်ပလွံ Springs ဧရိယာ၌အဆိုပါဖြစ်ရပ်ပုံမှန်တက်ရောက်ခြင်းနှင့်စပီကာများကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းဆွဲဆောင်နှင့်အကြောင်းအရာဂေဟစနစ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ထံမှခေါင်းဆောင်များပါဝင်နေသည်။ အဆိုပါ 2020 HPA Tech မှသီးသန့်မှာ 17 မှတဆင့်အရပျကိုဖေဖော်ဝါရီလ 20 ယူပါလိမ့်မယ် Westin မစ်ရှင် Hills ဂေါက်ကွင်း Resort & Spa ချို Mirage, CA. အတွက်
အဆိုပြုလွှာနှင့် Call: အဓိကအစီအစဉ်
အဓိကအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖေဖော်ဝါရီ 19 နှင့်ကြာသပတေးနေ့ဖေဖော်ဝါရီ 20, 2020 မဘို့ရာခန့်ရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားတင်ပြချက်များတင်းကြပ်စွာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး-အခမဲ့ content များအတွက် reserved နေကြသည်။ စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက Tech မှသီးသန့်၏ဤအပိုင်းတစ်ပိုင်းပရိုဂရမ်သိရပါတယ်နှင့် Tech မှသီးသန့်၏ Maestro အဖြစ်ရှုမြင်သူမာ့ခ် Schubin, အဓိကအစီအစဉ်ကိုအစည်းအဝေးများအကြောင်းအရာများ၏ကျယ်ပြန့ပါဝင်နိုင်ပါသည်ကြောင့်မှတ်ချက်ပြုထားသည်။ "ဒီ HPA Tech မှသီးသန့်သင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိရန်လိုခငျြနိုင်အရာအားလုံးအပြည့်အဝ chock high-သတင်းအချက်အလက်, အနိမ့်မိရိုးဖလာအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ Tech မှသီးသန့်အဘို့အကြှနျုပျ၏တရားမဝင်ဆောင်ပုဒ် '' တစ်စုံတစ်ဦးကအဖြေကိုသိတယ်သူကိုရှိရလိမ့်မည်။ '' ဖြစ်ပါသည် ကျနော်တို့စဉျးစားစရာ, စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အရေးကြီးသောအတွေးအခေါ်များအဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်နည်းပညာ၏ဖန်တီးမှုကိုအသုံးပြုခြင်းရှာကြာလော့။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုကျနော်တို့ပုံများနှင့်ဆက်စပ်အသံရွေ့လျားနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာများ၏တစ်ခုလုံးကိုခင်းကျင်းသို့ငုပ်လိမ့်မယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကလည်းပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်မထားဘူး: အခြားရွေးချယ်စရာဘရော့ဘန်း၏အသက်အရွယ်အတွက်ထုတ်လွှင့်ရုပ်ရှင်ရုံများအတွက်အကြောင်းအရာ, content တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, dynamic range ကို, ပိုကောင်းရုပ်ရှင်ရုံ, ဘောင်နှုန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Master, အဆင့်မြင့်နှစ်မြှုပ်ခြင်း, နိုင်ငံတကာဥပဒေ, ဟာသမျိုးဆက်, kernel ကိုထိန်းချုပ်မှု, အရှုံးပြန်လည်နာလန်ထူ မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှု, ညဥ့်ရူပါရုံကို, optical တိုးတက်လာ, plug-'n'-ကစား, VR အတွက် queasiness, robo-post ကို, ပတ်လည်ပုံရိပ်, terabytes လက်မ drives တွေကို, UHD II ကို, စိစစ်အတည်ပြု, တောအရပ်ထုတ်လုပ်မှု, x-band အင်တာနက် access ကို၏အထွက်နှုန်းတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ အလင်းရောင်ဒိုင်းခွေ, နှင့်သတ္တဗေဒ holography ။ "ဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်များနှင့်အလုပ်ရှာဖွေစူးစမ်းအရှိဆုံးဆန်းသစ်တွေးခေါ်ရှင်တစ်ဦးဝေး-အထိနှင့်ဖန်တီးမှုခေါ်ဆိုခဖြစ်ပါတယ်။ သူမြင်ကွင်းတစ်ခုမှမြင်မှတစ်စုံတစ်ရာနှင့်နားဂီယာမမျှတဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် ", သူ့နှစ်ပတ်လည် salvo နှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒီတော့ haptic / ထိတွေ့နိုင်သော, olfactory နှင့် gustatory applications များဖြစ်ကြသည်။ "
သဘာဝတွင်အလွတ်သဘောဖြစ်ကြပြီးအရှည်အနည်းငယ်စာကြောင်းများကဲ့သို့တိုတိုဖြစ်နိုင်သည့်အဆိုပြုချက်, The-ပါလိမ့်မယ်တင်ဆက်နေဖြင့်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်အကျိုးစီးပွားလျှင်တင်ပြသူဆက်သွယ်ပါမည်။ အဓိကအစီအစဉ်တွင်တင်ဆက် Set-up နဲ့ Q & A အပါအဝင်ပုံမှန်အားထက်ဝက်နာရီကြာချိန်၏ဖြစ်ကြသည်။ အဓိကအစီအစဉ်ကိုအဆိုပြုချက်တင်သွင်းဖို့နောက်ဆုံးရက်, အောက်တိုဘာလ 25, 2019 သောကြာနေ့နေ့၏အဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တင်ပြချက်များကိုစလှေတျရပါမည် [အီးမေးလျ protected].
နံနက်စာစားပွဲဝိုင်း: အဆိုပြုလွှာနှင့် Call
18 လေး: နံနက်စာစားပွဲဝိုင်း 20 မှာစတင်, ကြာသပတေးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီ7မှတဆင့်အင်္ဂါနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ 30 ရာအရပ်ကိုယူပါ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်အဆိုပြုချက်မပြုနိုင်သော်လည်းအဆိုပါက Moderator ဦးဆောင်တဲ့နံနက်စာစားပွဲဝိုင်း, စျေးကွက်သတင်းအချက်အလက်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ Schubin မှတ်ချက်များ, "စားပွဲတင်မော်ဒ, သင်ပေးဟောပြောတောင်းပဌနာ-to-တာဝန်, ရောင်းချ, kvell, ဒါမှမဟုတ်တစ်နာရီအဘို့အစီးသောစကားပြောဆိုမှုစောင့်ရှောက်ကြောင်းအရာအားလုံးထက်လုပ်ဖို့အခမဲ့ပါ။ "
နံနက်စာစားပွဲဝိုင်းမဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အားရှိပါတယ်။ အားလုံးနံနက်စာစားပွဲဝိုင်းမော်ဒအဆိုပါသီးသန့်မှတ်ပုံတင်ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်နံနက်စာစားပွဲဝိုင်းကိုစိစစ်ခြင်းဖြင့်ပါးမျှသီးသန့်မှတ်ပုံတင်လျှော့စျေးရှိပါတယ်။ နံနက်စာစားပွဲဝိုင်းများအတွက်အဆိုပြုချက်ဟာသူတို့ရဲ့အဆိုပြုမော်ဒအားဖြင့်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်နှင့်စားပွဲအများဆုံးအရေအတွက်ကရောက်ရှိနေပါတယ်တစ်ချိန်က (တစ်နေ့လျှင် 32), မပိုလက်ခံခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။
ခေါ်ဆိုမှုအပေါ်မှာသက်ရောက်ထင်ဟပ်ခုနှစ်, ရှေ Hallen, HPA ဥက္ကဋ္ဌကျနော်တို့အခြားမယုံနိုင်စရာ Tech မှသီးသန့်ပေါ်စတင်ပြင်ဆင်အမျှကျနော်တို့သိကောင်းစရာများ, မေးရိုးလာနေပြီဆောင်ခဲ့၏ 25 နှစ်ပေါင်းဆင်နွှဲဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တခါတရံတွင်ယခင်ကမမွငျရသောအကြောင်းအရာများ "ဟုဆိုသည်နှင့်ဤဆုံးသောရက်သတ္တပတ်အတွက် သဲကန္တာရ။ 25 နှစ်ပေါင်း, မာကု Schubin ၏တောက်ပသောခေါင်းဆောင်မှုအောက်, HPA Tech မှသီးသန့်အလေးအနက်ထားကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းမောင်းသောခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အကြောင်းအရာများတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်သူမည်သူမဆိုများအတွက်မဖြစ်မနေ-တက်ရောက်ရန်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လာမယ့်အဘယ်အရာကိုမှာခိုင်မြဲစွာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအတိတ်ရှာဖွေနေစဉ်ဒီနှစ်မှာတော့ကျနော်တို့ Tech မှသီးသန့်၏သမိုင်းကျင်းပပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါတင်ပြချက်များနှင့်ဆွေးနွေးမှုများအတွက်တဆင့်လာသောစစ်မှန်, ဆီလျော်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုကအမြဲထူးခြားသောယင်း HPA Tech မှသီးသန့်အစီအစဉ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီအရာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့စိတ်အားထက်သန်စွာဒီနှစ်အစီအစဉ်အတွက်အဆိုပြုချက်စောင့်ဆိုင်း။ ငါတင်သွင်းရန်သင့်အားတိုက်တွန်းပါသည်။ "
နောက်ထပ် 2020 HPA Tech မှသီးသန့်အဘို့အသေးစိတ် TR-X ကိုအာရုံစိုက်အပါအဝင်လာမယ့်သီတင်းပတ်ထဲမှာကြေညာခဲ့သည်လိမ့်မည်, supersession သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဇုန်အသေးစိတ်ကို
အဆိုပါ HPA Tech မှသီးသန့်ပင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဇုန် slot နှစ်ခုအလျင်အမြန်ဖြည့်ပါ, ထွက်ရောင်းချ, နှင့်ပရိုဂရမ်းမင်း, မနက်စာစားပွဲဝိုင်း။ program ကို slot နှစ်ခုအဘို့အအစောပိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်တင်ပြချက်များကိုအလွန်အမင်းအားပေးတိုက်တွန်းနေကြသည်။ Tech မှသီးသန့်မှတ်ပုံတင်အောက်တိုဘာလတွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ 2020 HPA Tech မှသီးသန့်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, အလည်အပတ်ခရီး www.hpaonline.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HPA HPA Tech မှသီးသန့် လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-09-12
ယခင်: IBC 2019 မှာ Colorist Society ကအင်တာနေရှင်နယ်
နောက်တစ်ခု: EditShare ဖောက်သည်အောင်မြင်မှု၏ Stuart McGeechan ဒုတိယသမ္မတခန့်အပ်